Archive du 20190924
Fikambanana VAR “Hanenenana io tsy mifidy io !”
Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben’ny tanàna izay atsy ho atsy, hoy ny filohan’ny fikambanana VAR, Jerry Rakotoarijaona.
Ranesa Firiana “Mafy loha ny Malagasy kanefa be zavatra takiana”
Fifidianana ben’ny tanànan’Iarivo Laharana faha 2 ny TIM, faha 4 ny IRD
Raha anio 24 septambra no nofaritan’ny lalàna hivoahan’ny lisitra ofisialin’ireo kandida nahafeno fepetra handray anjara amin’ny fifidianana ben’ny tanàna ny 27 novambra,
Asam-panjakana ambony Mbola mihafihafy aloha ny tanora
Noventesin’ ny Filoha Rajoelina ary nivoiziny mafy hatrany fa ny tanora no apetraka hitondra sy hitantana ny firenena.
Basikety Analamanga sokajy U 18 Tompondaka ny Mb2All vehivavy sy ny Dtsc lehilahy
Voahosotra ho tompondakan’ny taranja basikety sokajy U 18 vehivavy 2019 eto anivon’ny ligin’Analamanga ny ekipan’ny Mb2All vehivavy izay nandresy 51-42
Aiza no aleha ?
Efa nahazo filoham-pirenena isika izao ary nahazo depiote izay nolazaina hatrany moa hatramin’izay fa “solombavantsika”. Eo am-piomanana amin’ny fizahana izay ho ben’ny tanàna indray izany izao.
Fahazoana tany sy fandraharahana Songonan'ny vahiny eto amin'ny taniny ny Malagasy
Tena mihazakazaka tato anatin'ny 10 taona izao ny fanotorana tany eto Antananarivo sy ny manodidina. Tahaka.izany koa ny famaritana velaran-tany goavambe eny hatramin'ny torapasika sy moron-dranomasina any amin'ny faritra maro.
Voka-panadinana ratsy “Tompon’andraikitra ny fitondram-panjakana!”
Ny filoha malaza afrikanina tatsimo teo aloha, Nelson Mandela, mihitsy no efa niteny fa raha tiana ny hampandroso firenena dia ny fanabeazana no mila atao lohalaharana, hoy ny filohan’ny antokom-bahoaka Malagasy na antoko politika ABA, Dany Rakotoson.
Mpamonjy voinan’Antananarivo Novatsian’ny CUA fitaovana
Tafiditra ao anatin’ny ivon’ny fankalazana ny faha-70 taonan’ny Vondrona Mpamonjy Voina ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) niforona tamin’ny janoary 1949, ny andro omaly nanaovana hetsika teny amin’ny Parvis Analakely .
Cosafa Women’s Cup 2019 Resin’i Madagasikara 16-0 i Seychelles
Raha lavon’i Botswana 6-0 ny ekipam-pirenena vehivavy Malagasy sokajy U 17